TETIKASAN’NY FILOHA ANDRY RAJOELINA : Vonona ny lelavola roa hetsy tapitrisa Ariary hamatsiana ny Fihariana
Ireo tanora sisa no andrasana. Tsy ho ela intsony dia hiainga ny tetikasa fihariana, isan’ireo fandaharan’asa mafonja novolavolain’ny Filoha Andry Rajoelina. 8 août 2019
Efa vonona tanteraka ny teti-bola mitentina hatrany amin’ny roa hetsy tapitrisa Ariary hanatanterahana izany.
Tafiditra ao anatin’ireo fanamby lehibe napetraky ny Filoha Andry Rajoelina ny ho fampananan’asa ny tanora Malagasy. Volavolaina sy atosika izy ireo hanana ny orinasany madiodio. Noho izany indrindra no nananganan’ny Filoha ny tetikasa Fihariana hoentina hanomezana tosika ireo tanora te hanangana orinasa ho azy manokana. Tsy ho ela intsony dia hiainga ny fanatanterahana ity tetikasa goavana ity. Efa milamina ny lafiny rehetra indrindra fa ny ara-bola. Lelavola mitentina hatrany amin’ny roa hetsy tapitrisa Ariary no efa vonona hamatsiana sy hampandehanana ny tetikasa Fihariana. Hisy ny fihaonana mivantana hataon’ny Filoha Andry Rajoelina amin’ireo tanora manerana ny Nosy maniry ny handray anjara ao anatin’ny Fihariana.
Ny herinandro ho avy io no hitety Faritra hifampiresaka mivantana amin’ireo tanora hiditra ao anatin’ny fandraharahana ny tenany, ary hijery ihany koa ny fomba hoentina manatanteraka izany. Ankoatra ny fanatsarana ny fari-piainan’ny Malagasy amin’ny fanamaivanana ny tsy fananan’asa dia mandray anjara betsaka amin’ny fanatsarana ny lafiny ara-toekarena eto Madagasikara ihany koa ny tetikasa Fihariana. Seha-pihariana maro no voakasika ao anatin’ny Fihariana. Isan’izany ny lafiny famokarana mifandraika amin’ny fambolena sy fiompiana. An’arivony maro ireo tanora mahavita fianarana avy eny anivon’ireo sekoly miankina sy tsy miankina amin’ny fanjakana. Saika ny antsasa-manilan’izy ireo anefa no tsy an’asa satria betsaka ny tinady noho ny tolotra avy amin’ireo orinasa. Maro be araka izany ireo tanora tsy an’asa.
Napetraky ny Filoha Andry Rajoelina ho vaindohan-draharaha araka izany ny hanosika ny tanora Malagasy hanangana asa. Teto an-drenivohitra manokana dia efa nisy ireo efa nisitraka fanampiana avy amin’ny Filoha. Efa hisandrahaka manerana ny Nosy izany atsy ho atsy ary hatomboka amin’ny alalan’ny fifampiresahana sy ny fihainoana ny tetikasan’ireo tanora isam-paritra.